FXCC FAMPIANARANA SY FANDAHARAM-BAHOAKA FIANARANA & FITSARANA | FXCC
Home / FXCC FAMPANDROSOANA SY FAMPANDROSOANA FONTSIKA TERMS & CONDITIONS
FXCC FAMPANDROSOANA SY FAMPANDROSOANA FONTSIKA TERMS & CONDITIONS (Niala aina)
Period Promotion: Ity fampiroboroboana ity dia hivoaka amin'ny 30th ny Desambra 2017.
Mpanjifa vaovao sy efa misy ao amin'ny FXCC. (Tompon'ny kaontin'ny Standard na XL)
Mifidy mba hisintonana ny handray anjara amin'ilay Tolotra amin'ny fanamafisana am-bavaka ny fanapaha-keviny amin'ny alalan'ny Traders Hub, bonus section.
Leverage: Ny fampiasam-bola be indrindra amin'ny fampiroboroboana dia ny 1: 200
Fananana azo antoka: Tolotra ara-bola izay manampy vola vaovao ho an'ny kaontin'ny komity Mpifanaraka, amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola omen'ny FXCC. Fanelanelanana ao anatiny, fanitsiana ny fandanjalanjana, fanesorana ny fifandanjana misy ary ny famerenana azy indray, ny fanombohana orinasa / Affiliate / Partner na ny kaomisiona dia tsy ho raisina vola vaovao .
100% Bonus start-up: Fa ny voalohany Ny Departemantam-bola azo antoka ataon'ny Mpifanaraka voafidy amin'ny kaonty tsirairay miaraka amin'ny FXCC mandritra ny vanim-potoana fanatontosana Mandidy ny mpividy dia hahazo 100% Bonus ny fiantombohan'antoka ao anatin'ny ora fiasana 24 ora (24) taorian'ny fanampiana voalohany. (Ny takila voalohany dia ambany noho ny karazana kaonty)
50% Bonus Funding: Fa ny manaraka / fanampiny Kaominina voafidy ny vola farafahakeliny $ 100 US izay ataon'ny Mpifanaraka voafidy amin'ny kaonty mifandraika amin'ny FXCC mandritra ny vanim-potoana fanatontosana Mandidy ny mpividy 50% Bonus funding ao anatin'ny 24 ora (ora 24) taorian'ny nahazoan-dàlana toy izao / fanampiny .
Ny Credit Bonus dia azo ampiasaina ho toy ny fivarotana varotra ary ho hita eo amin'ny kaontin'ny varotra Kalandrie 50 androany satria ny daty nahazoana ny Bonus ("vanim-potoana azo atao"). Aorian'io daty io, ny fialan-tsasatra Bonus sisa rehetra dia hesorina amin'ny kaonty.
Vola be indrindra: The indrindra Ny isa ny Bonus rehetra (anisan'izany ny Bonus Start-Up sy / na Funding) izay neken'ny FXCC ho an'ny mpanjifa manan-kery manokana amin'ny fotoana rehetra dia tsy mihoatra ny totalin'ny $ 10,000 US (na mitovy).
Client 'A' 1st mametraka $ 1,000 ▶ Ny mpanjifa 'A' dia hahazo $ 1,000 (izany hoe 100%) ho Bonus Start-Up;
Avy eo, ny Client 'A' dia nanao 2nd mametraka $ 3,000 ▶ Ny mpanjifa 'A' dia hahazo $ 1,500 (izany hoe 50%) ho Bonus famatsiam-bola
Client 'B' 1st mametraka $ 15,000 ▶ Ny mpanjifa 'B' dia hahazo $ 10,000 ho Bonus Start-Up.
Avy eo, ny Client 'B' dia nanao 2nd mametraka $ 5,000 ▶ Ny mpanjifa 'B' dia hanao tsy mahazo bonus fanampiny.
Ny bonus dia ampidirina amin'ny kaonty ara-barotra Fahazoan-dàlana ho an'ny mpanjifa ho toy ny bola, Ny Bonus dia natao fotsiny ho an'ny tanjona ara-barotra sy izany tsy azo very. Ny tombony azo avy amin'ny famatsiana ny bonjasan'ny lisitra dia azo alaina avy amin'ny kaonty raha tsy misy ny fiatoana.
Ny fanesorana ny vola avy amin'ny kaonty ara-barotra Mandoa vola dia azo atao ampahany na feno ary izany dia miteraka ny sandan'ny Bonus Credit araka ny tokony ho izy.
Ny mpanjifa 'C' dia nangataka fisintonana $ 2,000 ▶ Ny bonus azony dia hahena 2,000 XNUMX $.
Ny client 'C' dia nangataka ny hisintona ny vola feno (7,000 $) ▶ Hongotana tanteraka ny bonus voaraina.
Cashback: Ho an'ny Credits Bonus dia ho lany ny fandefasana ny Bonus ary hiverina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanaraha-maso mialoha ny famaranana ny varotra tsirairay na inona na inona ny isa araka ny fehintsoratra manaraka.
Ny famonoana ny anjaran'ny fivoaran'ny 1 ho an'ny serivisy dia hamindra ny habeny $1.0 (na mitovy) avy amin'ny Credit Bonus mba hialana sasatra.
Ny mpanjifa 'D' dia nivarotra fifanakalozana feno EUR1 100 fenitra mahazatra (izany hoe nanokatra sy nanidy ny filaminana), miaraka amin'ny tombony $ XNUMX ▶ Io dia nanampy ireto fidirana roa manaraka ireto ao amin'ny tantaran'ny kaonty:
Bonus Deposit $ 1.0 (Izany hoe ny volan'ny bonus dia miova ho vola tena izy ary manampy amin'ny balan'ny kaonty).
Ary nipoitra avy amin'ny balim-balala toy izao manaraka izao:
Amin'ny vanim-potoana azo atao raha toa ka mandanjalanja ny lanjan'ny kaontin'ny mpanjifa (anisan'izany ny vola miditra sy ny fandaniana) 30% amin'ny Credit Bonus azo ampiasaina (raha lazaina amin'ny teny hafa: ny fitondran'ny kaonty dia mitovy amin'ny ambany na ambany 130% amin'ny tahiry Bonus misy), ny vola azo avy amin'ny Bonus dia havaozina (mivoaka) voatahiry ao amin'ny "Accounts Saving" tsirairay ary hampiasaina hamoahana ilay mpanjifa manan-kery voalaza etsy ambony ho an'ny varotra hafa novonoina miaraka amin'ny fandanjalanjana sisa tavela amin'ity kaonty ity araka ny paragrafy 10 ka hatramin'ny faran'ny vanim-potoana azo atao.
- 30% avy amin'ny Bonus (credit) ampiasaina = $ 300
Raha mieritreritra ny Client 'D' dia manana varotra misokatra 1 lot EURUSD miaraka amin'ny fatiantoka mitentina $ 700 ankehitriny, midika izany ▶ Balance + Tombony / fatiantoka mitsingevana = $ 1,000 - $ 700 = $ 300
$1,000 $300 $0 Tsy misy mari-pototra